Feno ny fepetra rehetra : hisokatra ny alatsinainy ny taom-pianarana 2017-2018 | NewsMada
Feno ny fepetra rehetra : hisokatra ny alatsinainy ny taom-pianarana 2017-2018
Afaka hiatrika ny taom-pianarana vaovao ny mpianatra amin’ireo Zap sy Cisco nikatona nandritra ny iray volana noho ny valanaretina pesta. Vonona ny fepetra rehetra iantohana ny fanaraha-maso ny fahasalaman’ny mpianatra any an-dakilasy, hoy ny minisitera, omaly.
“Feno ny fepetra ahafahan’ny sekoly misokatra handray mpianatra ho amin’ny taom-pianarana vaovao”, hoy ny talen’ny serasera ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Tsitohara Serge, omaly, teny Anosy. Voatsangana isaky ny sekoly manerana ny Nosy ny komity mpanara-maso ny fahasalaman’ny mpianatra sy ny mpanabe any an-dakilasy. Vonona ny toerana hanokanana ny tsy salama ka mety hitondra fanahiana, efa nozaraina koa ny fitaovana rehetra ilaina nomen’ny Unicef toy ny fitsapana hafanana, fonon-tanana sy takom-bava ho an’ny mpikarakara any an-toerana.
Vita ny fanofanana ny tomponandraikitry ny fahasalamana any an-tsekoly ho an’ny Dren 22 sy ny sefo Zap ary ny sefo Cisco indrindra tany amin’ny toerana nahitana trangana pesta. Nanamafy ity tale ity fa mahalala ny tokony atao avokoa ny mpiandraikitra rehefa hisokatra ny sekoly amin’ny alatsinainy ary mahafehy ny asa andrasana aminy raha sendra misy trangana pesta ao amin’ny sekoly iadidiany. Manana ny arofenitra rahateo ny sekoly.
Tsy miova ny datin’ny fanadinam-panjakana samihafa fa ny tetiandrom-pampianarana no nisy fanovana ho an’ireo Cisco voakasiky ny fiatoana nandritra ny iray volana.
Efa nianatra ny ampahany amin’ireo sekoly katolika eto Antananarivo, nanomboka ny 25 oktobra lasa teo, fa tsy niandry ny 6 novambra voalazan’ny minisitera. Nametraka fepetra koa izy ireny ho fiarovana ny mpianatra ao aminy.